DAAWO: Somalia oo Kenya u dhigtay cashar DIBLOMAASIYADEED (Khilaaf gudeed soo ifbaxay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Somalia oo Kenya u dhigtay cashar DIBLOMAASIYADEED (Khilaaf gudeed soo ifbaxay)
DAAWO: Somalia oo Kenya u dhigtay cashar DIBLOMAASIYADEED (Khilaaf gudeed soo ifbaxay)
(Nairobi) 09 Sebt 2019 – MW Kenya ee Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in aanu gebi ahaanba ku faraxsanayn bandhigga siyaasadeed ee Wasiir Dibadeedkiisa Monica Juma, taasoo uu iminka ka baaraan degayo inuu cayriyo.
Sida ku dhigan The Star, Kenya ayaa dareensan inay Somalia oo muddo dheer burbursanayd welina aan si buuxda usoo kabanin ay 3-0 dirtay dhan diblomaasiyadda iyadoo ku bahdishey dhowr fagaare oo caalami ah, jeer ay Kenya ka dhaadhacsanayd in Somalia ay tahay dal ay hubto inay ku baashaali karto, waxaana eeddaa in badan loo tiriyay Wasiirad Juma.
Ms Juma ayaysan sidoo kale isku fiicnayn Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaarad Dibadeedka Kenya Danjire Macharia Kamau, iyadoo ay marar badan dhacday inay labadoodu ku dhaqaaqaan laba arrimood oo is diiddan, halkii ay wax isla qoondayn lahaayeen.
Kenya ayaa aad u saluugsan sida ay u maaraysay muranka ay Kenya alliftey ee ay ku sheeganayso dhul-badeedka Somalia, iyadoo muran dheer oo soo maray laba Gole Amaan oo Adduunka iyo Afrika ah kaddib ay Maxkamadda ICJ ogolaatay in 2 bilood dib loogu dhigo ilaa 4-ta Nofeembar, halkii ay Kenya rabtey 12 bilood, sida uu sheegay Philippe Gautier oo ka tirsan ICJ.
Intaa kuma eka ee Ms Juma ayaa sidoo kale lagu haystaa inay ka caraysiisay Itoobiya oo ay muddo dheer ahaayeen xulufo olog ku ahaa dhagarta Somalia oo ay heshiis u galeen 1963-kii, taasoo ah jug wayn oo istaraatiji ah oo ku dhacday Kenya.
”Kenya waxay u ekaatay dal FOOWDO ah, halka Somalia ay muujisay inay tahay dal bisil oo mas’uul ah, isla markaana fahamsan siyaasadda iyo xeerarka caalamka.” ayuu yiri Faarax Macallin oo sheegay inay Juma darbo kala daashey siyaasaddii dibedda Kenya.
Previous articleDF Somalia lacagaha ay garoomada ku dhisayso dhinacyo ka MUDAN baa badan!
Next articleMuran ka dhashay TIRAKOOB ay QM kasoo saartay heerka akhris-qorista Somalia